पार्टीमा छाता हरायो
श्याम प्रसाद शर्माको समूहमा आवद्ध भई राजनीतिक काम गरेको बेला निकै कडा अनुशासनको पालना गर्नु पर्दथ्यो । उच्च बिचार र सरल जीवन भन्ने गर्दथ्यौं । म काठमाडौंको मध्य शहरको मध्यम बर्गिय हुने खाने परिवारमा जन्मेकी भए पनि किसान, मजदूर, सफाई मजदूर लगायतका आधारभूत जनतासंग भेट्दा नयाँ झिलिमिलि भन्दा पुरानो, खुईलिएको झुत्रो लुगा, थोत्रो चप्पल, डम्बरकुमारीको खास्टो ओढी चुल्ठो बाँधेर ʻराजनीतिक पार्टीको स्वरुप लिई नसकेको समूहʼ का मेरा गुरु साथीहरुसंग हिड्ने गर्दथें । किसानको खेतको बाटो छेउबाट हिड्दा बाली नोक्सान गर्नु हुँदैन, कसैसंग सापटी लिएको छ भने फिर्ता गर्नु पर्दछ, जनतासंग सित्तैमा केहि पनि लिनु हुँदैन, कसैलाई पनि अभद्र व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थ्यौं । जनताको घरमा पुग्दा जनताको घरको काम सघाई दिने, केटाकेटी भएमा पढाई दिने, आफूले खाएको थाल आफै माझ्नु पर्ने नियम जस्तै थियो । कतिपय अवस्थामा किसानको खेतमा गई खेतीपातीमा सघाई दिने र भारी बोकी अन्न, घाँस ओसारी दिने काम गर्न पछि पर्दैनथ्यौं । जाँड, रक्सी, चुरोट खानु नहुने र जनता, साथीभाई बिच एक आपसमा तँ भन्न नपाउने र सवैले सवैलाई तपाई भनेर सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो । जस्तै संकट तथा दुःखलाई पनि सहन गर्न सक्नु पर्ने भन्ने थियो । त्यसकारण आफूलाई दुःख पीडा पर्दा पनि साथीहरु समेतलाई नभनी सहने बानी प्रायः सवैमा थियो ।
२०३५ । ०३६ को आन्दोलन पछि तत्कालिन नेकपा (माले) ले देशमा ससानो समूहमा रहेका कम्युनिष्ट तथा बामपन्थी समूहसंग एकता गर्ने अभियान चलायो । मालेका प्रतिनिधि साथीहरुले हामीलाई पटक पटक भेटी पार्टीमा आवद्ध गराउनको लागि कोशिश गरे । हामी भने माले पार्टी कस्तो हो, त्यो पार्टीले मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्गको लागि काम गर्न सक्दछ कि सक्दैन, हामी उनीहरुको आनीवानी कस्तो छ, जीवनशैली कस्तो छ भनेर जाच्ने गर्दथ्यौं । कहिले काहिँ मालेका साथीहरुको शौखिन स्वभाव जाँच्नको लागि राम्रो चकटी ओछ्याई दिने गर्दथ्यौं, बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर । तर हामीले उनीहरुमा पनि त्यहि सरल स्वभाव, ईमान्दारीता, दृढता र त्यागको भावना पायौं । २०३६ सालमा सुलोचना मानन्धरको नेतृत्वमा हामी मालेमा समाहित भयौं ।
महिलाहरु प्रतिको हेर्ने दुष्टिकोण र अनुशासन धेरै नै कडा थियो । कोहि महिलाले आफूलाई कोहि पुरुषले गलत मनसाय राखेर र्हेयो, छोयो वा हिँसा भयो भन्ने रिपोर्ट पार्टीमा पर्ने वित्तिकै पार्टीले गम्भिरतापूर्वक लिने गर्दथ्यो । आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ समिति बनाईन्थ्यो । गल्ती अनुसार कार्वाही गर्दथ्यो । कार्वाहीमा निलम्वन, पार्टी सदस्यतावाट निस्कासन र पार्टीबाट नै निस्काशन गर्ने गरिन्थ्यो । कार्वाही गर्दा व्यक्तिको पद या जिम्मेवारी माथि थियो भने कार्वाहीको प्रकृति अझ कडा हुन्थ्यो । त्यसको अर्थ थियो, पार्टीमा महिलाहरु पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्थे ।
कार्यकर्ताहरुले अब्बल खालका अनुशासन, ईमान्दारिता राख्दथे र सक्रिय हुन्थे । उनीहरुमा पार्टीका नेताहरुले सहि तरिकाले सहि गन्तव्यमा र्पुयाउँछन्, समाजलाई परिवर्तन गर्छन् र जनताले सुख पाउँछन् भन्ने गहिरो बिश्वास थियो । कार्यकर्ताहरु पार्टी वा नेताले खटाएका, अह्राएका कामहरु तदारुकताकासाथ लागु गर्दथे, चाहे तिनीहरुको बाटोमा अनेकौं बाधा अवरोध किन नआउन् । मानौं नेता र कार्यकर्ताहरु नङ र मासु सरह हुन्थे । एक बिना अर्काको अस्तित्व हुँदैनथ्यो । कार्यकर्ताहरु नेता, पार्टी तथा पार्टीका दस्तावेजहरुको सुरक्षाको लागि पक्राउ, यातना र मृत्युवरण हुनको लागि समेत तयार हुन्थे । पार्टीका गोपनियताहरुलाई हरहालतमा कायम गर्दथे । ईमान्दारीताको नमूना कस्तो सम्म थियो भने नेता वा पार्टीले कुनै कागजमा केहि लेखेर स्टिज गरेर वा नगरेर कुनै स्थानमा र्पुयाउने जिम्मा दिए र ‘यो गोप्य छ खोल्नु हुँदैन’ भने पछि, कार्यकर्ताहरुले खोल्दैनथे । एकटुक्रा कागजमा लेखेको कुरा के हो भन्ने पत्रवाहक कार्यकर्तालाई थाहा हुँदैनथ्यो वा थाहा पाउने मनसाय पनि राख्दैनथे । पार्टी कार्यकर्ताहरुमा भएको अनुशासन, कठोर मेहनत, त्यागको भावना र सरलताले नै पार्टी आधारभूत जनसमुदाय बिच पुग्न सफल भएको थियो र पार्टीको बिस्तार देशभरी फैलिन सक्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भैसकेपछि पार्टीको कार्यालय बागबजारमा खुल्यो । दिनै पिच्छे पार्टी कार्यालयमा घुईंचो बढ्न थाल्यो । माले र माक्र्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बनी सकेपछि पार्टी अझ ठूलो भयो । म पनि बेला बेलामा कार्यालयमा जाने गर्दथें । एक दिन मैले मेरो छाता पार्टी कार्यालयमै छोडिछु । मलाई के ढुक्क थियो भने मैले मेरो छाता पाउनेछु । तर भोली पल्ट जाँदा मैले भेटिन । राखेको ठाउँ र वरपर सवै ठाउँमा हेरें कहिँ पनि भेटिंन । कार्यालयमा बस्ने साथीहरुसंग सोधें, उनीहरुले थाहा छैन, कसैले लग्यो होला भने । मैले पार्टीलाई त्यो बेलासम्म त्यहि ईस्पाते अनुशासन भएको पार्टीको रुपमा बुझेकि थिएँ । छाता हराउँदा मलाई यहि कुराले सताएको थियो, यसतो इस्पात जस्तो कडा अनुशासनको अभ्यासबाट बनेको पार्टीको कार्यालयमा मेरो छाता कसरी हरायो ? कसैको अनुमति पनि नलिई छाता लग्ने व्यक्ति को होला?
समयको परिवर्तनसँगै मेरा प्रश्नहरु बहुलट्ठीपन बनिसकेका थिए । पार्टी पहिले जस्तो नभई, बिशाल पार्टी बनिसकेको थियो । पार्टीमा एउटै राजनीतिक आधार, संस्कार भएका मानिसहरु मात्र थिएनन्, धेरैवटा पार्टीबाट मान्छेहरु आईसकेका थिए । खुल्ला भैसकेको परिस्थितिमा त चमक दमक अर्कै भईसकेको थियो । मानिसहरु निरन्तर रुपमा फूलमाला र अबीर लगाउँदै धमाधम पार्टी प्रवेश हुँदै थिए । पार्टीमा निश्क्रिय भएका डरपोक मान्छेहरु पनि आन्दोलनमा ठूला योगदान गरेको भनेर चर्को भाषण गर्न थालिसकेका थिए । उनीहरुलाई पार्टीको पोर्टफोलियो हात पार्ने, टिकट पाउने र चुनाव जित्ने आशा थियो भने पार्टीलाई धेरै भन्दा धेरैलाई पार्टी प्रवेश गराउने, पार्टी ठूलो बनाउने, चुनावमा धेरै संख्या जित्ने, बहुमत ल्याउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने ईच्छा थियो । सरकारको तहमा पनि अधिकृतबाट उपसचिव, उपबाट सह, र सहबाट सचिवको लागि बढुवा हुँदै थिए । संबैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्तिहरु हुँदै थिए । त्यसमा अधिकांश पार्टी राजनीतिको गतिविधिमा देखा नपरेका धेरै हुन्थे भने, देखा परेका थोरै । पुरानो राजनीतिबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका कार्यकर्ताहरु ज्यु हुजुर गर्न जान्दैनथे, त्यस्ता पंक्ति राजनीतिक पदीय लाभबाट टाढा रहे । पार्टीका नेताहरुको घर आँगनहरुमा दिनरात कार्यकर्ता र समर्थकहरुको घुईंचो देखा पर्न थाल्यो । एकथरि कार्यकर्ताहरुको चमक, दमक र हाईदुहाई देखा पर्न थाल्यो भने अर्को थरिले कार्यकर्ताहरुले पार्टीमा क्रमशः विवेक हराएको, नीति, पद्धति र अनुशासन हराएको गुनासो गरे र उनीहरु पाखा लाग्दै गए । भनौं पार्टीमा मान्छेहरुले केहि कुरा पाए र धेरै कुरा गुमाउँदै गए । पार्टीको खर्चको लागि कार्यकर्ताहरुले लेबि तिर्दथे, तर पछि त्यो परम्परा हराउँदै गए । त्यसको परिपूर्तिको लागि एक थरि व्यापारी र ठेकेदारहरुको उदय भएकोछ । त्यसले पार्टी प्रतिको मानिसहरुको आस्था, भावना र जिम्मेवारीबोध हराईदिएकोछ । एक थरिबाट चर्को चर्को भाषण हुन थाले भने अर्को थरिले सुन्नै छोडे । आशण ग्रहण गर्ने र भाषण गर्ने नेताहरुको संख्या बढेकाछन् भने धैर्यतापूर्वक सुन्ने कार्यकर्ता तथा श्रोताहरु हराउन थालेकाछन् । भर्खरको स्थानिय चुनाव परिणामले पार्टी तर्फका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या हराएको सूचित गरेकोछ । हत्केला पोल्ने गरी ताली बजाउने, घाँटी फुल्ने गरी नारा लगाउने, खुशी हुँदै थुमुक्क थुमक्क नाचेर रमाउने हर्षित नचालुहरु, घाम, पानी, असिना केहि पनि नभनी जुलुशमा हिड्ने ती अभियन्ताहरु सवै पार्टीका मतदाताहरु मात्र हुँदो रहेनछ है भनेर संकेत गरेकोछ ।
पार्टीमा केहि चिज हराउनुको अर्थ केहि चिज गुमाउनु मात्र हुँदो रहेनछ, पार्टीको मूल्यांकन गर्नु र कमजोरीलाई सुधार्ने अवसर पनि हुँदो रहेछ । छाता हराएको कुरा त एक सांकेतिक सूचना मात्र थियो । पार्टीमा बिधानभन्दा माथि रहन चाहनेहरुको बाहुल्यता रहन पुग्यो भने, दम्भ बढ्यो भने, सुनाउने रहर गर्ने तर सुन्न नचाहने व्यक्तिहरुको विगबिगि रहन गयो भने कार्यकर्ता, पार्टीले जे पनि हराउन सक्दछ । जे होस आफै नहराओस भन्ने चिन्ता गर्ने हो । अझै भन्नु पर्दा पार्टी नहराओस, लोकतन्त्र नहराओस, जनताको अधिकार र सुख नहराओस । बेलैमा होशियार हुनु नै बुद्धिमानी हो ।